Nay Bayin နေဘုရင်
တံမေသဒီ ကောမံသုရေ။ သောအပနာပ သုသုပိ။ အဓံသိတိ ဖုဝိသိဝေ။ ကကောကဂေါ နမာမဟံ။ Life is too short...! ဘဝဆိုတာ တိုတောင်းလွန်းပါတယ် သူငယ်ချင်းတို့။ ကဗျာတွေ ရေးမယ်။ စာတွေ ရေးမယ်။ ခံစားချက်တွေ မျှဝေမယ်။ လမ်း အတူလျှောက်ကြမယ်။ ကမ္ဘာလောက။Hell and Heaven. ကွမ်းရွက်။ ရေမွေးပင် သရက်သီး။ စင်ကာပို ဗောင်းလုံးကြော်။ ကြက်သား လုံးရွက် ဟင်းချို။ ကိုယ် မင်းနဲ့ ပြောခဲ့တဲ့ သံစဉ်။ မြိတ်ကမ်းနားမှာ ဝေ့နေတဲ့ ပင်လယ်ဆီစော်နံ့။ နှစ်ကိုယ် ခွဲလို့ မရတဲ့ စိတ်။ အားလုံးဟာ တိုတောင်းလွန်းလှပါတကား။
တခါတုနျးက မွို့ကလေးတမွို့မှာ(ကလေးပုံပွငျ)၊ အပိုငျး ၁၊ အခနျး ၁
သိပျမကွာသေးခငျက အဖွဈအပကျြလို့လညျး ပွောလို့ ရသလို တျောတျောကွာသှားပွီ ဖွဈတဲ့ အဖွဈပကျြလို့လညျး ဆိုနိုငျပါတယျ။
ဇှဲရှငျးတယောကျ အသကျ (၈)နှဈသားနဲ့ မိဘမဲ့ ဖွဈသှားရပါပွီ။ သူ့မိဘကို အသုဘခတြဲ့ နမှေ့ာ ရပျကှကျထဲက လူတှကေ ဘာသိဘာသာပဲ။ သာမနျ မထူးခွားတဲ့ နတေ့နလေို့ပဲ ကုနျဆုံးသှားတယျ။ အသုဘခခြိနျ သင်ျခြိုငျးမှာ ကြီးကနျးတှေ တအားအား တအားအားနဲ့ အျောမွညျနတောကတော့ ထူးခွားတယျ။ နကေ ဒီလောကျတောငျ ပွငျးပွငျးရှရှ ပူလောငျနပေမေယျ့ သင်ျခြိုငျးကုနျးက သဈပငျပနျးမနျတှကေတော့ စိမျးလနျးလို့၊ မွကျရိုငျးပနျးတှဆေို အဝါရောငျ အပှငျ့ကလေးတှေ ပှငျ့လို့ပေါ့နျော။
အသုဘ ခပြွီးနောကျ ဘယျလောကျတောငျမှ မရှိတဲ့ လူအုပျက ကှဲသှားတော့ ကောငျလေး၊ အိမျပွနျမှာလား၊ လိုကျပို့ပေးမယျလဆေိုတဲ့ လောကှတျစကားကလေး တခှနျးတောငျ မကွားရဘဲ တကောငျကွှကျ ဖွဈသှားတဲ့ ဇှဲရှငျးဟာ လေးကနျတဲ့ ခွလှေမျးတှနေဲ့ အိမျပွနျလာတယျ။ ရငျဘတျထဲမှာတော့ ပွိုတော့မယျ့ မိုးလို အုံ့ဆိုငျးမှိုငျးဝနေတောပေါ့။ လမျးတှကေလညျး ခွောကျကပျပွီး အသကျမဲ့နတေယျ။ သူတို့ မိသားစု အတူနခေဲ့တဲ့ အိမျလေးကို အဝေးကနေ လှမျးမွငျလိုကျရတော့ ဇှဲရှငျး ငိုခငျြလာတယျ။
အိမျပေါကျဝ ခွံတံခါးဆီ ရောကျလာတော့ ခွံထဲမှာ သီးပငျ စားပငျတှလေညျး ကြိုးတိုးကြဲတဲလေးပါပဲ။ ညှိုးရျောနတေဲ့ပုံနဲ့ ယိုငျတိုငျတိုငျ လတေိုကျတိုငျး လှုပျယမျးနတေယျ။ လှကေား သုံးဆငျ့ကို လှမျးတကျလိုကျပွီး၊ နောကျကို ပွနျလှညျ့ကွညျ့လိုကျတယျ။ တယောကျယောကျမြား အပွငျက ဝငျလာမလားလို့လေ။ ဒါပမေဲ့ ဇှဲရှငျး ဘယျသူ့ကိုမှ မမွငျပါဘူး။ လကျက အိမျအဝငျ တံခါးဘောငျကို ကိုငျရငျး ခတ်ေတ ကွောငျအနျးအနျးနဲ့ ရပျနမေိသေးတယျ။ တံခါးက ဆှေးနပေါပွီ။ လကျကိုငျတှကေလညျး ပွုတျလုတညျးတညျးပေါ့။
အိမျထဲ လှမျးဝငျလိုကျတယျ။ ကိုယျလုံးကသေးတော့ ကလေး လမျးလြှောကျတာ အိမျထဲမှာ ဘာအသံမှ မကွားရသလို ဖွဈနတေယျ။ အိမျကွီးက မိုးနသေလို ဖွဈပွီး တအိမျလုံးမှာမှ သူတယောကျထဲ။ ဇှဲရှငျး တကောငျကွှကျဆိုတာ ဘာလဲ သဘောပေါကျလာသလိုလိုပဲ။ ကိုယျ့မှာ ဘာဝငျငှမှေ မရှိဘူး။ ဘယျမှာ အလုပျသှားလုပျရမလဲ ဆိုတာတောငျ မသိဘူး။ ကြောငျးကို ဘယျလို တကျရမလဲ။ အိမျ သော့ခတျပွီး ကြောငျးသှားတကျရမလား။ သူ ကြောငျးတကျတယျပဲ ထား။ ထမငျးကို ဆိုငျမှာ ဝယျစားရမှာလား။ ဆိုငျမှာ ဝယျစားမယျဆို ပိုကျဆံ လိုတယျလေ။ ပိုကျဆံက ဘယျသူ မုနျ့ဖိုး ပေးမှာလဲ။ ဒါဖွငျ့ အလုပျလုပျရတော့မှာပေါ့။
စိတျညဈညဈနဲ့ ဧညျ့ခနျး မညျကာမြှ ဖွဈတဲ့ အိမျရှေ့ ကွမျးပွငျမှာ အသာအယာ တငျပလ်လငျခှေ ထိုငျခလြိုကျတယျ။ လကျတဖကျကို ကိုငျးထောကျထားပွီး တဖကျကတော့ ပေါငျပျေါ တငျထားတယျ။ နံရံမှာ ခြိတျထားတဲ့ ကြောငျးလှယျအိတျကို အဓိပ်ပာယျမဲ့သလို ကွညျ့နတေယျ။ အခုက ကြောငျးပိတျရာသီပါ။ လှယျအိတျက ဖုနျတောငျ နညျးနညျး တကျနပွေီ။ ဇှဲရှငျး ဘာလုပျရမလဲ။ ကလေးပီပီ သူ့မှာ ကစားရမယျ မဟုတျ၊ အလုပျလုပျရဖို့၊ ပိုကျဆံရဖို့ တှေးနရေပွီ။ ဘဝက ဘာတှနေဲ့ ဖှဲ့စညျးတညျဆောကျထားလဲဆိုတာ သူ လလေ့ာရတော့မှာလား။
ဖတျပွီးရငျ ရှယျပေးပါ။ ကျောပီ မလုပျပါနဲ့။
Posted by Bhone Soe at 10:31 AM No comments: Links to this post
Labels: story, တခါတုနျးက မွို့ကလေးတမွို့မှာ
D'you believe so.?
then plz comment in my post?
Posted by Bhone Soe at 1:15 PM No comments: Links to this post
မနက်ခင်းတိုင်းသည် နိုးထရခက်သော နေ့ တနေ့ ဖြစ်လို့ နေသည်။ ပြီးတော့ အချိန်ဆွဲရင် ဆွဲသလောက် ကုန်လွယ်မြန်သော တလတာ ကာလသည် ဘာရယ်ကြောင့်မှန်း မသိ၊ နှမြောတသ ဖြစ်ကာ လွမ်းဆွေးသော ခံစားချက် ပေါ်သည်။ ကုန်လေပြီးသော နာရီ စက္ကန့်တံများကို နောက်ပြန်လှည့်ချင်သော စိတ်သည် လူတိုင်းမှာ ရှိလိမ့်မည်။ ဘဝတွင် ဘယ်သူမှ ဘယ်သူ့ကို လွှမ်းမိုး ချုပ်ကိုင် ခြယ်လှယ်နိုင်ခြင်း မရှိဟု ထင်ရသော်လည်း လက်တွေ့ဘဝတွင်မူ တယောက်နှင့် တယောက် အမှီသဟဲ မဖြစ်ဘဲကို နေ၍ မရကြောင်း သဘောပေါက်ရချေတော့သည်။မနက်ခင်းတိုင်းသည် ယခင်ကထက် မနေ့ကထက် ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်ကထက် ရှေ့တလကထက် ပိုပို ပူလာသည်ဟု ခံစားနေရသည်။ ဆောင်းသည် (မြူနှင်းတွေနှင့်) မဆောင်းတော့၊ လမ်းမများသည် ညတာကာလကို ဖြတ်ကျော်ခဲ့ပြီးသော်လည်း မနေ့က အပူငွေ့ သဲ့သဲ့ ကျန်သေးသည်။ ကတ္တရာလမ်းမထက် ဖြတ်သန်းနေသော မော်တော်ကား၊ ဆိုင်ကယ်များသည် မနက်ခင်းမှာပင် လူကလည်း ပူ၊ အင်ဂျင်ကလည်း ပူကာ ချွေးတလုံးလုံး ဖြစ်ချေတော့သည်။၂၀၁၅ ဒီဇင်ဘာသည် ကံကောင်းခြင်းနှင့် အဆုံးသတ်မည်လော၊ ကံဆိုးခြင်းနှင့် အဆုံးသတ်မည်လော ဝေခွဲ မတတ်ပါ၊ ဒီဇင်ဘာ ၅ ရက်တွင်တော့ ကျွန်ုပ် မြစ်ငယ်ထဲ ဆိုင်တဆိုင်၌ ကတ်ကြေးကိုက် မှာစားနေချိန် လူတဦးက ကျွန်ုပ်စားနေသော ကတ်ကြေးကိုက်ဖိုးကို ရှင်းလိုက်သည် ဆိုတော့ အလွန်ပင် အားတုံ့ အားနာ ဖြစ်မိချေရတော့သည် တမုံ့။ နေလုံးကြီးသည် အရှေ့ဘက် မစူးတစူး အရပ်မှ ထွက်ပေါ်ပြီး တဖြည်းဖြည်း မြင့်တက်လာချိန်၌ ဒေါင်းဖန်ဝါ နေလုံးထဲတွင် သိုမှီးထားသော နှစ်ထရီလီယံ သက်တမ်းရှိ အတိတ်ဖြစ်ရပ်များကို သယ်ဆောင်လာတော့သည်။ ဒီတနေသည်လည်း ဒီတနေ့၏ အဖြစ်အပျက်များကို မှတ်တမ်းတင် သိမ်းဆည်းကာ အနောက်ဘက် ဂေါယာကျွန်းသို့ စုန်းစုန်းမြုပ် ဝင်သွားပေလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့ စိတ်ထဲတွင် အတိတ်က ဖြစ်ရပ်များကို ပြန်ပြောင်း စဉ်းစားလိုက်သည်နှင့် ပေါ်လာသလိုလို သိသလိုလို ဖြစ်နေရသည်မှာ အဘယ်ကြောင့်နည်း။ နေရာအရပ်ဒေသ တခုခုကို ယခုမှ ပထမဦးဆုံး ရောက်ဖူးသည် ဖြစ်သော်လည်း၊ ရှေးတုန်းကတည်းကပင် ရင်းနှီးပြီးသားလို ဖြစ်နေရသည်မှာ အဘယ်ကြောင့်ပေနည်း။ မြိတ်မြို့သည် ပင်လယ်ကမ်းနား ဆိပ်ကမ်းမြို့ တမြို့သာ ဖြစ်သည်၊ ဤမြို့လေးသည် ဂူဂဲလ် မြေပုံတွင် ရှာကြည့်လိုက်ရာ သေးသေးလေးပဲဟု မြင်ရသည်။ ဤမြို့လေးသည် မြို့စီးပွားရေး ကောင်းမွန်သလား မကောင်းမွန်သလားတော့ မပြောတတ်၊ အထပ်တရာကျော် မိုးမျှော်တိုက်ကြီး မရှိသေးတာတော့ သေချာသည်။ တနေဝင်တိုင်း မိသားစု စားဝတ်နေရေးအတွက် ဒေသကို ခွာပြီး နေရာသစ်ကို ပြောင်းရွှေ့သူတွေ ရှိနေမှာတော့ သေချာသလိုလို မသေချာသလိုလို။ နိုဝင်ဘာလအတွင်းကတော့ နာရီစင်ကြီး ရှိသည့် လမ်းမကြီးကို နောက်ဆုံးပေါ် စက်ကြီးနှင့် နိုင်လွန် လမ်းမကြီး ခင်းကျင်းလိုက်တာတော့ မြင်နေရသည်။ ထိုလမ်းမကြီး ပြီးသွားတော့ လူတွေလည်း မေ့သွားတော့သည်။ မနေ့တုန်းက ဘယ်ဟင်းစားလဲဆိုတာ ဘယ်သူမှ ပြန်မစဉ်းစားသလိုပင် မှတ်မှတ်ရရလည်း တခုမှ မကျန်ခဲ့ချေ။ တနှစ်ပြီး တနှစ် အချိန်တွေ ကုန်လွန်လာခဲ့သည်မှာ မြန်ဆန်လွန်းလှပါချေကောဟု ထင်မိသည်။ မျက်စိ တမှိတ်ကိုပင် မြန်လွန်းသည် ပြောမည် ဆိုလျှင် တအောင့်ဟု ပြောပါမည်၊ တအောင့်တာ ကာလအတွင်း၌ အတိတ်က ဖြစ်ရပ်များကို ပြန်ပြောင်းစဉ်းစားပြီး ဆွေးသလိုလို ဖြစ်ရသည် ဆိုလျှင် လက်ခံနိုင်ပါ့မလား။ အချို့သော စာရေးဆရာများသည် စာကို တီထွင် ဖန်တီး ရေးတတ်လှချေသည်။ ထိုသူတို့ တယောက်လက် တယောက် ရေးသားလာသော အချိန်ကာလနှင့် ပတ်သက်၍ သရုပ်ဖော်မှုတွင် ကျွန်ုပ် သဘောကျသော စာသားမှာ ဤသို့… ရက်ကိုလစား၊ လကို နှစ်စား အချိန်တွေ လျင်မြန်စွာ ကုန်ဆုံးသွားလေသည်ဟူ၍တည်း။ ရက်လနှစ်များကို လူတို့ ဖမ်းဆီး ဆုပ်ကိုင်ထားခြင်းငှာ မစွမ်းသာ၊ အချိန်နှင့် ဒီရေသည် လူကို မစောင့်၊ အင်း လူကိုမှ မစောင့်တာ မဟုတ်၊ ဘယ် သက်ရှိသတ္တဝါကိုမှလည်း မစောင့်၊ နောက်ဆုံး ဒီရေက အချိန်ကို မစောင့်သလို အချိန်ကလည်း ဒီရေကို မစောင့်ချေ။ အချိန်ဆိုတာသည် နဂိုက ရှိနေသည့် အရာကော ဟုတ်ပါရဲ့လား။ကျွန်ုပ်တို့ဘဝသည် အလွန်သနားစရာ ကောင်းလှသည်ဟု ထင်မြင်မိသည်။ အချိန်နှင့် ဒီရေသည် လူကို မစောင့်သော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့သည် တယောက်ကို တယောက် စောင့်နေကြသည်မှာ နေ့တိုင်းပင်။ အစည်းအဝေးပွဲ လုပ်သည်။ နောက်ကျသည်။ စောင့်နေရသည်။ အများက တယောက်ကို စောင့်ခြင်း။ ဘုရားပွဲ သွားရန် သူငယ်ချင်း နှစ်ယောက် တိုင်ပင်ပြီး ချိန်းချက်ထားသည်။ အချိန်ကျသော် မျှော်နေသူက ပေါ်မလာသေး။ ဖုန်းဆက်လိုက်သော် ငါလာနေပြီ သို့မဟုတ် ငါ ဘာဖြစ်နေလို့ဟု ကြားရသည်။ တယောက်က တယောက်ကို စောင့်ခြင်း။ မတော်တဆ ဖြစ်နေတာဆိုလျှင် ခွင့်လွှတ်သင့်လှပေသည်။ အိမ်သူအိမ်သား အချင်းချင်း ကိစ္စ တခု လုပ်ရာ၌၊ အပြင်သွား ပြုရာ၌ တယောက်ကို တယောက် မစောင့်ရဘဲတော့ မရှိချေ။ စောင့်ရင်း စောင့်ရင်းနှင့်ပင် အချိန်တွေ တရွေ့ရွေ့ ကုန်၍ ကလေးက လူငယ်၊ လူငယ်က လူကြီး၊ လူကြီးမှ လူအိုဘဝသို့ ရောက်ရှိလာတော့သည်။ အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်း အရွယ်သို့ ရောက်သည်အထိ အချိန် ဘယ်လောက်လောက်ကို စောင့်ခဲ့ရပါသလဲ။ တချို့လူများသည် အချိန်တွေ ပိုနေသည်ဟု ပြောကြသည်၊ ရထားစီးရင်း၊ ကားစီးရင်း၊ လေယာဉ်စီးရင်း အချိန်တွေ ပိုနေသည်ဟု ပြောကြသည်။ သက်သက်မဲ့ ပြောခြင်းသာ ဖြစ်သည်။ ယခု ဒီဇင်ဘာလ ဖြစ်သည်။ အရင်လို မအေးသေးတာ သေချာသည်။ အနွေးထည် ဝယ်ရမလား မဝယ်ရဘူးလား မသေချာ၊ နှစ်စဉ် လုပ်မြဲ ဖြစ်သော ဈေးပွဲတော်ကိုတော့ ဘုရားငါးဆူကွင်း (ယခင်ကဆို ဦးမြတ်လေးပန်းခြံ)ထဲမှာ ၃ ရက်နေ့က ၇ ရက်နေ့ထိ ငါးရက်ကြာ ကျင်းပနေပြီ။ ၃ ရက် ည ၈ နာရီ ဝန်းကျင် ကျွန်ုပ် သွားလည်ရာ လူတွေ ကြိတ်ကြိတ်တိုးနေတော့သည်။ မုန့်ဆိုင်တန်းလည်း ရှိ၊ အဝတ်ဆိုင်က ပိုများသည်။ သည်အဝတ်တွေ ဘယ်ကလာသလဲ။ ရောင်းလို့ကို မကုန်ဘူးလား။ ဘာတွေ ရောင်းပြီး ဘယ်သူတွေ ဝယ်နေကြတာလဲ။ အရက်ဘီယာဆိုင်ကတော့ ထုံးစံမပျက် စည်သည်။ အကျင့်စရိတ္တများကို တော်တည့်အောင် မဖြောင့်မှန်နိုင်ကြသေး။ လုခြင်းလည်း ရှိသည်။ ရန်ပွဲလည်း ရှိသည်။ ကလေးတွေကလည်း ရဟတ် စီးမည် မေမေ။ ဇာတ်ပွဲလည်း မလာတော့၊ ဒစ်စကို တီးဝိုင်းသာ နားညီးအောင် ကပြနေတော့သည်။ ရမ်အရောင်းမြှင့်တင်ရေးနားမှာ လူငယ်တွေ အုံလိုက်ကျင်းလိုက်၊ ရုတ်တရက်ကြီး ကျွန်ုပ် အထီးကျန်သည်ဟု ခံစားရသည်။ လူတွေ အထီးကျန်သည်။ ကစားခုန်စားရင်း ဖြေဖျောက်နေရသည်။ လူတွေ အထီးကျန်နေသည်။ သောက်စားပျော်ပါးရင်း ညမိုက်နေရသည်။ လူတွေ အထီးကျန်နေသည်။ အလုပ်တခုကို လုပ်ရင်း မိုးလင်းနေရသည်။ အားလုံး အထီးကျန်နေကြသည်။ ဘုရားပွဲ ရှိလျှင်၊ ဈေးပွဲတော် ရှိလျှင် ရောက်လာကြသည်။ တဖြည်းဖြည်းနှင့် အိမ်ထောင်ရက်သား ကျသွားကြသည်။ သားသမီး မြေးမြစ်တွေ ရလာကြသည်။ အရောင်းမြှင့်တင်ရေး ရှိလျှင်၊ ဟောပြောပွဲ ရှိလျှင်၊ လူစည်ကားရာ စုဝေးရာ နေရာတခု ရှိလျှင် ရောက်လာကြသည်။ ရက်များ ကုန်လွန်သွားသည်။ လများလည်း ကုန်လွန်သွားသည်။ တနှစ်ပြီး တနှစ် ရောက်လာသည်။ လူတွေလည်း တနှစ်ပြီးတနှစ် ပျောက်ကွယ်သွားသည်။ ကျန်ရစ်သူတွေကတော့ အထီးကျန်နေရသည်။ု
Posted by Bhone Soe at 10:03 AM No comments: Links to this post
My paint art ''
Posted by Bhone Soe at 8:38 PM No comments: Links to this post
တပ်​ပြင်​ရပ်​ကွက်​ ​ပတ္တမြား​ကျောင်းတိုက်​ ပရဝုဏ်​အတွင်းမှ သိမ်​​တော်​
Posted by Bhone Soe at 8:23 PM No comments: Links to this post
还记得初中那会儿逃课上网，同学半途逃 课跑网吧来告诉我我爸来了！真的是前脚 跟后脚啊！差点被抓 住……难为他又翻墙又 绕路的跑来，硬生生的把我爸摩托车给甩在后面…… 现在想想这才是真正的兄弟啊
အလယ်​တန်းတုန်းက အတန်းလစ်​ပြီး အင်​တာနက်​ သုံးတာ မှတ်​မိ​သေးတယ်​၊ အတန်း​ဖော်​က လမ်းတဝက်​မှာ အတန်း​ပြေး၊ အင်​တာနက်​ဆိုင်​ ​ပြေးလာပြီး ငါ့အ​ဖေ လိုက်​လာပြီဆိုပြီး လာ​ပြောပြတယ်​၊ တကယ်​ကို ​ရှေ့ဆက်​​နောက်​ဆက်ပဲ​၊ ဖမ်းမိဖို့ သီသီ​လေးပဲ လိုတယ်​၊ သူငယ်​ချင်း ခမျာ သနားစရာ အုတ်​နံရံ​ကျော်​ လမ်းပတ်​ပြီး ​ပြေးလာရတာ၊ အပြတ်​အသတ်​ပဲ ငါ့အ​ဖေဆိုင်​ကယ်​ကို ​​နောက်​မှာ ချန်​ထားခဲ့ရစ်​တယ်​၊ အခု စဉ်းစားကြည့်​​တော့ ဒါမှသာ အစစ်​အမှန်​ ညီအစ်​ကို ပါလား​လေ။
前几天和老婆女儿去 商场，老婆看上一件 外套，换上以后问 我:怎么样？我还没回答呢，女儿来了一句话让我笑抽了:妈妈，这件衣服还是挂在那里更好看！
​ရှေ့သုံး​လေးရက်​က မိန်းမရယ်​ သမီးရယ်​နဲ့ ​ရှော့ပင်း​မော ထွက်​တာ မိန်းမက ကုတ်​တထည်​ မျက်​စိကျသွားတယ်​၊ စမ်းဝတ်​ပြီး​နောက်​ ငါ့​မေးတယ်​၊ ဘယ်​လို​နေလဲတဲ့၊ ဘာမှ မ​ပြောရ​သေးခင်​ သမီး​ပြောလိုက်​တဲ့ စကားတခွန်း​က ငါ့ အူတက်​မတတ်​ ဖြစ်​သွားတယ်​၊ ​မေ​မေ၊ ဒီအင်္ကျီ ဟိုမှာ ချိတ်​ထားတာမှ ပိုကြည့်​​ကောင်းဦးမယ်​တဲ့။
朋友的朋友前几天去 看荷花，学人家跳起 来拍照，结果给她跳 池塘下去，头先插进 泥土里，我真的是笑 尿了。
တ​လောက သူငယ်​ချင်းရဲ့ သူငယ်​ချင်း ကြာပန်း သွားကြည့်​တာ၊ သူများကို အတုခိုးပြီး ခုန်​ကာ ဓာတ်​ပုံ ရိုက်​​တော့ ​နောက်​ဆုံး ​ခုန်​တာ ​ရေကန်​ထဲ ကျသွား​ရော၊ ​ခေါင်းကအရင်​ ရွှံ့ထဲ စိုက်​​နေ​တော့ ငါ့မှာ ရယ်​လိုက်​ရတာ ​သေး​တောင်​ ထွက်​တယ်​။
上小学，我英文很 差，一次考了个0， 老师实在是气的没招 了，把试卷发给我 说：小心啊，别把蛋 打了。卧槽
မူလတန်းတက်​တုန်းက ငါ အင်္ဂလိပ်စာ အရမ်းညံ့တယ်​၊ တခါကျ​တော့ ​ဖြေလိုက်​တာ0ရတယ်​၊ ဆရာမဆို စိတ်​ဆိုးလွန်းလို့ ဘာ​ပြောရမှန်း​တောင်​ မသိ​တော့၊ အ​ဖြေလွှာ ငါ့​ပေးပြီး ​ပြောတယ်​၊ သတိထား​နော်​၊ ဥမကွဲ​စေနဲ့တဲ့၊ ​သေစမ်း။
中午吃饭，饭馆有免费汤自己盛。于是， 去盛汤的时候服务员把我的饭收了，追服务员把饭要回来的时 候，另一个服务员又 把汤收了！亲，你们这么勤快，老板给你们加薪吗？
​နေ့လည်​ ထမင်းစားချိန်​၊ စား​သောက်​ဆိုင်​မှာ ကိုယ့်​ဘာသာယူ အခမဲ့ ဟင်းရည်​ ရှိတယ်​၊ ဒါနဲ့ ဟင်းချို သွားခပ်​​နေချိန်​မှာ စားပွဲထိုးက ငါထမင်းကို သိမ်းသွားတယ်​၊ အဲစားပွဲထိုး​နောက်​ လိုက်​ပြီး ထမင်း ပြန်​​တောင်းလာတဲ့ အချိန်​မှာ ​နောက်​စားပွဲထိုး တ​ယောက်​က ဟင်းချိုကို သိမ်းသွားပြန်​​လေ​ရော၊ ​တောက်​၊ မင်းတို့ ဒီ​လောက်​ ဖင်​​ပေါ့​နေလို့​ရော သူ​ဌေးက လစာတိုး​ပေးမှာမို့လို့လား။
Posted by Bhone Soe at 9:45 AM No comments: Links to this post
လမ်းသည်​ ဖြတ်​သန်းလို့ ရသည်​။
bìng rén-----chū yuàn.
လူနာ ​ဆေးရုံက ဆင်းလို့ ရတယ်​။
​ဘောလုံးကွင်းမှာ ကစားလို့ ရတယ်​။
nǐ xiànzài -----zǒu le.
ခင်​​ဗျား အခု သွားလို့ ရပြီ။
ā, zhè yàng-----.
အား... ဒီလိုလည်း ရတယ်​။
wǒ -----chōu yān ma?
ကျ​နော်​ ​ဆေးလိပ်​ ​သောက်​ ရမလား
-----zuò xià ma?
yāo qǐng lǎoshī chīfàn.
ဆရာ/ဆရာမ ကို ထမင်းစား ဖိတ်​တယ်​။
míngtiān wǒmen -----qù yóuyǒng.
မနက်​ဖြန်​ ငါတို့ ​ရေသွားကူးလို့ ရတယ်​။
nǐ -----pīpàn wǒ, wǒ bù-----pīpàn nǐ ma?
နင်​ ငါ့ကို ​ဝေဖန်​လို့ ရပြီး ငါက နင့်​ ​ဝေဖန်​လို့ မရဘူးလား
tāmen dōu -----chī zhūròu.
သူတို့အားလုံး ဝက်​သား စားလို့ ရတယ်​
xiàkè le. Dàjiā -----zǒu le.
အတန်းဆင်းပြီ။ အားလုံး သွားလို့ ရပြီ။
hé tā jiéhūn.
kě bu kěyǐ-----?
Posted by Bhone Soe at 5:21 PM No comments: Links to this post
—	jìn zhǐ diào tóu
→	ဂငယ်​ မ​ကွေ့ရ
—	Miǎn fèi tōng xíng
→	အခမဲ့ ဖြတ်​သန်းသွားရန်​
—	jìn zhǐ chāo chē
—	néng gěi wǒ yī zhāng dìtú ma?
→	ငါ့ကို ​မြေပုံ တချပ်​ ​ပေးနိုင်​မလား
—	nǐ yǒu zhōngguó dìtú ma?
→	နင့်​မှာ တရုတ်​ပြည်​ ​မြေပုံ ရှိလား
—	wǒ méiyǒu Miǎndiàn dìtú.
→	ငါ့မှာ မြန်​မာပြည်​ ​မြေပုံ မရှိဘူး
—	Shéi yǒu dānlǎo de dìtú?
→	ဘယ်​သူ့မှာ မြိတ်​မြို့ ​မြေပုံ ရှိလဲ
—	wǒ zěnme qù shìzhōngxīn?
→	မြို့လယ်​​ခေါင်​ ဘယ်​လို သွားရမလဲ
—	nǐ kěyǐ zuò gòngjiāochē qù.
→	နင်​ ဘတ်​စ်​ကား စီးသွားလို့ ရတယ်​
—	nǐ bùbì fùqián. wǒ miǎnfèi gěi nǐ chī.
→	နင်​ ​ငွေရှင်းစရာ မလိုဘူး နင့်​ အခမဲ့ ​ကျွေးတာ
Posted by Bhone Soe at 2:21 PM No comments: Links to this post
တခါတုနျးက မွို့ကလေးတမွို့မှာ(ကလေးပုံပွငျ)၊ အပိုငျး...
animal (2) animals (1) art (16) astrologer (1) betel leaf (1) birthday (1) chinese language (7) diary (1) dream (1) English (3) flower (2) flowers (1) game (2) humor (4) mountain (2) odds (27) painting (2) papaya (1) photo (14) photos (5) plant (3) plants (2) poem (36) song (1) story (17) tagged (2) winter (1) ဆုံးမစာ (2) တက်ကျမ်း (2) တခါတုနျးက မွို့ကလေးတမွို့မှာ (1) တရားဓမ္မ (2) ပန်း (6) ဗဟုသုတ (1) ဘုရား (1) ကြီးပွားရေး (2) ဟာသ (7) အင်္ဂလိပ်မြန်မာနှစ်ဘာသာ (8) ဆေးနည်း (3) ရွှေကံကူ (1)
တခါတုနျးက မွို့ကလေးတမွို့မှာ (1)
Subscribe To နေဘုရင်
အီးမေးထားခဲ့ရင် ပို့ပေးမယ် စာတွေ